“ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး …. ဒို့အရေး … ဒို့ အရေး ““ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ် …. အလိုမရှိ … အလိုမရှိ “ – H2Oupdatenews
“ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး …. ဒို့အရေး … ဒို့ အရေး ““ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ် …. အလိုမရှိ … အလိုမရှိ “
oungmarine11@outlook.com 19/09/2020	No Comments
“ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး …. ဒို့အရေး … ဒို့ အရေး ““ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ် …. အလိုမရှိ … အလိုမရှိ “လွန်ခဲ့သည့် ၃၂ နှစ်က ကျွန်တော်တို့ သည်လို အားရ ပါးရ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါသည် ။
လှည်းနေ လှေအောင်း ခုနှစ်ရက် သားသမီးတို့၏ ရင်တွင်း ခံစားချက်များကို ဦးဆောင်သူ မရှိ ဖွင့်ချကြရာတွင် …
ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်ကြာယုံမျှနှင့် ငါတို့သာလျှင် ကျေးဇူးရှင် အမှန်ဖြစ်သည်ဟု အရှက်နည်းစွာ အလွဲသုံးစား လက်ဝါးကြီးအုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း လုံး၀ မထင်မှတ်ခဲ့ကြချေ။
တော်လှန်ရေး မလိုအပ်တော့ပဲ့ တည်ဆောက်ရမည့် အချိန်ကာလရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နားလည်ကြသူများများ ထွန်းပေါ်ကြရန်သာ မျှော်လင့် မိပါသည်။
Previous Previous post: ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ကြိုဆိုသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား တူရကီ ကျေးဇူးတင်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမှန်တကယ် လက်ခံထားရသည့် ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၄-သန်းကျော်ရှိဟု တူရကီပြော။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုမင် တူရကီ၌ ရောက်ရှိနေ
Next Next post: မြန်မာက နယ်စပ်အနီး စစ်တပ်များ ချထားလာသည်ကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြောင်းကြား၊ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ အလုံးအရင်းဖြင့် ထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်သည်ဟု ဒါကာအစိုးရ သတိပေး၊